Iyini idivayisi ye-intrauterine?
Abafuni ukukhipha isisu, akukho wesifazane, kepha ukuvinjelwa kokukhulelwa okungafunwa nemithi yokuzala yomlomo, futhi, kunemiphumela emibi yomzimba. Imithi enjalo ingaphazamisa isizinda se-hormonal futhi iholele ezifweni ezihlukahlukene ezihlobene nezitho zokuzala. Ngakho-ke, ukuphuma kuleso simo kuyithuba lokubeka imithi enjalo njenge-intrauterine evuthayo "Multiload", okuzohlinzeka ngokuvikeleka okunokwethenjelwa ngokukhulelwa okungafuneki futhi, ngesikhathi esifanayo, isizinda se-hormone sizohlala sijwayelekile.
Abantu abaningi banesithakazelo kulokho idivayisi ye-intrauterine ibukeka futhi iyini? Idivayisi ye-intrauterine iyinsiza encane, engaba nezinhlobo ezihlukahlukene, kepha, ngokuyisisekelo, idivayisi yocingo efana ne-T ngendlela ye-spiroluted spiral. Zonke zazo zenziwe nge-alloy or silver alloy, futhi esibelethweni i-spermatozoa ifa ngenxa yokuqoqwa kwama-phagocyte: ayengeke asebenze ngenxa yesenzo se-ion metal kwi-motility ye-spermatozoa.
Uma kwenzeka okungenani isibungu esisodwa sisaphila, ngeke sikwazi ukunamathela kwi- endometrium yesibeletho ngenxa yokuthi kukhona ukuvunguza endaweni leyo. Ngakho-ke, yena, ongenayo i-unfertilized, uyadonswa esibelethweni kanye nokufihla esikhathini.
Mayelana ne-intrauterine lemimoya ingagwetshwa ngamacala amabili. Izimfanelo zabo ezinhle zihlanganisa ukuthembeka kokuvikelwa nokulula ukusetshenziswa. Kukholelwa ukuthi imimoya ingcono futhi inokwethenjelwa kuneminye imikhakha yokukhulelwa, okufanele isithathwe ngesenzo ngasinye socansi noma ngokuhambisana nephethini ethile. Kungaba kuhle ukuphawula, ukuthi abathuthukisi bokubeletha okunjalo, njenge-intrauterine evunguza, izimpendulo ezicatshangwa cishe bonke abesifazane. Futhi, ukuvunguza akuphazamisi ubuhlobo bobulili, akekho, noma omunye umlingani. Ngesikhathi ukusetshenziswa kwalolu hlelo lokubeletha, impilo yowesifazane ihamba ngesigqi esivamile: ingakwazi ukuzibandakanya kunoma imuphi umdlalo, ukuphumula noma ukuhamba - lokhu ngeke kuthinte impilo yakhe nomphumela wokuvunguza. Lokhu kubonakala ikakhulukazi ngabesifazane ababesebenzisa imithi yokubeletha ngomlomo: ngeshintsho endleleni yokuphila, isimo sezulu kanye nezinye izinto, owesifazane angase akhathazeke ngenxa yenguquko emlandweni we-hormonal. Uma usebenzisa i-intrauterine yokukhulelwa, ukubuyekezwa ngakho cishe kulungile njalo. Kumele kuqashelwe ukuthi ukuvunguza kuneshibhile kunokusebenzisa ezinye izindlela zokuvimbela ukukhulelwa.
Ngendlela, noma yikuphi owesifazane ophoqelekile ukuba azi ukuthi idivayisi ye-intrauterine ivuleka, impendulo eqinisekisiwe, iqala ukwenza ngokushesha ngemuva kokufakwa kwayo. Futhi, uma ufuna ukukhulelwa, owesifazane angayilahla nganoma yisiphi isikhathi futhi aqhubeke nokuthula ngokuphila kwakhe kocansi. Ukukhulelwa kuza ngokushesha, ngokuvamile ezinyangeni ezimbili kuya kwezine. Owesifazane oye wabeletha ingane futhi ngemuva kwalokho ubeke ukuvunguza, angaphinda aqhubeke nokudla ubisi lwesepha. Ngakho-ke ukuvuthwa akunazo izenzo zokwelapha emzimbeni wayo. Yilokhu okushiwo impendulo enhle evela kwabesifazane mayelana ne-intrauterine spirals.
Kodwa kukhona ukuphazamiseka kwengqikithi. Ngaphezu kokuhle, izimpendulo ze-intra-uterine zinezinkinga. Futhi owokuqala ukuthi ukuya esikhathini kuyaqhubeka isikhathi eside, kuningi futhi kungagxuma ngezinhlungu zokuhlukunyezwa. Lokhu kubangelwa ukucasuka kwengqimba yangaphakathi yesendlalelo se-endometriyamu esibelethweni, esiqala ekuqaleni kokuya esikhathini sokuphuma kwegazi. Ngaphezu kwalokho, izifo eziphilayo zingangena esibelethweni ngokuvunguza kanye nama-tendrils futhi zivusa ukuvuvukala kwezingxenyekazi. Kule nkinga, ngokuvamile kuphulwa kwamatayipi we-fallopian, ama-spikes angase athuthuke, okuvame ukuholela ezinkingeni ukuze kungenzeka ukuthi ukhulelwe. Ukuthola isikhathi eside sokuvuthwa kwesibeletho kungabangela i-fibrosis, i-endometriosis nezinye izibilini. Ngakho-ke, amadivaysi e- hormones intrauterine asetshenziselwa iminyaka emihlanu. Zibuye zimelele ifomu elifana ne-T, kodwa isimiso sesenzo sabo sihlukile. Ngakho-ke, ukulungiswa kwama-hormone "Levonorgestrel" okuqukethe ukuvuthwa kukhuthaza ukuqina kwe-mucus, okuholela ekubunjweni kwesikhala esibelethweni, futhi akudluli i-spermatozoa. Futhi lezo ezingena esibelethweni, azisebenzi, ngakho-ke azikwazi ukusebenza. Emva kokususwa kwalokhu kuvunguza, ukukhulelwa, njengombuso, kungenzeka ngokushesha emva kokuphela kokuya esikhathini sokuqala. Ngaphezu kwalokho, ukuthi izimpendulo ze-intrauterine ezivuthiwe zinomuntu ohlukile, akufanele zikhohlwe ukuthi zenza kahle umsebenzi wokukhulelwa, unomphumela omuhle wokwelapha, ongeke ukwazi Yenza ukuvunguza okuvamile. Uma usebenzisa lokhu kuvunguza, azikho izintambo zokuya esikhathini, zingakhuthaza ukwelashwa kwe-endometriosis, i- uterine fibroids futhi ayivumeli i-endometrium ukuba ikhule.
Ngakho-ke, singaphetha ngokuthi imimoya elula ingaba nomthelela omkhulu emzimbeni, kodwa imivimbo ye-hormonal, ngaphezu kwemisebenzi yokukhulelwa, nayo inomthelela wokwelapha.
Ubuhlungu besisu esingaphansi phakathi kwabesifazane: izimbangela
Kungani isifuba sami sasilimaza ngaphambi kwesikhathi sami?
Indlela yokwenza imbongolo ibe ngaphezulu
Isikhathi sama-follicle ane-IVF. Ilungiselela ukukhishwa kwe-follicles
Gravity: ifomula, kwencazelo
Umbadlana Asus P5B Deluxe - i ikhambi ekahle inhlangano ephezulu ukusebenza PC esekelwe isokhethi LGA775
Ukuhlola D: izigaba nezinyathelo
Izilwane Ihlathi ezisohlwini Red Encwadi Russia: isithombe kanye nencazelo